CBM Considering Revising Policy Rate | Myanmar Business Today
Home Business Local CBM Considering Revising Policy Rate
CBM Considering Revising Policy Rate
The Central Bank of Myanmar is considering revising its policy rate but will makeadecision only when necessary, its deputy governor told the country’s legislative body on February 11.
U Soe Min made the remark duringapresentation of reports on fiscal policy implementation and the country’s financial stability.
“When considering if we need to lower interest rate, we aim to strengthen businesses – which can help increase the productivity of the country asawhole – while minding the inflation rate, which is moderately high. We will revise the interest rate when necessary and appropriate,” said U Soe Min.
Although other developing countries use their interest rate policy to drive economic development, Myanmar cannot do the same as it still lacksastrong and developed financial market and the amount of currency in circulation is not big enough to drive investments that contribute to the economy, he added.
Under such conditions, revising interest rate can frustrate attempts to foster economic growth and lead toasurge in poor loan quality and worsen the inflation rate, ultimately destabilizing the economy.
The central bank set the interest rate benchmark for credit at 10 percent andaceiling of 13 percent for collateralized loans and 16 percent for non-collateralized loans. It allows banks to set savings interest rate in the 8-10 percent range.
ချေးငွေအတိုးနှုန်းများကို ပြုပြင်ပြောင်း လဲရန်စဉ်းစားလျက် ရှိသော်လည်း သင့်တော် သည့်အချိန်ရောက်မှသာ ပြောင်းလဲပေးနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံတောာ် ဗဟို ဘဏ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးမင်းက ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ပြော ကြားခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁ဝ ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဧပြီမှ စက်တင်ဘာအထိ ငွေကြေးမူဝါဒအကောင်အထည်ဖောင် ဆောင် ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာနှင့် ငွေရေး ကြေးရေးတည်ငြိမ်မှု အခြေအနေအစီရင်ခံ စာအကြောင်းကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌက ရှင်းလင်းစဉ် ထည့်သွင်းပြော ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”ဗဟိုဘဏ်က အတိုးနှုန်းလျှော့ချမှုကို စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ ချေးငွေကုန်ကျစရိတ် လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု စွမ်း အားကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ် ငန်းတွေ လည်ပတ်မှုပိုမိုအားကောင်းလာစေ ရန်နဲ့ ပြည်တွင်းဝယ်လိုအား ပိုမိုအားကောင်း လာစေဖို့ စဉ်းစားပြီးတော့ အခြားတဖက်မှာ လတ်တလော အတန်အသင့်မြင့်မားနေတဲ့ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုအခြေအနေကို ထည့် သွင်းစဉ်းစားလျက်ရှိပြီး သင့်လျော်သည့် အချိန်မှာ အတိုးနှုန်းပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ကို ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဗဟို ဘဏ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးမင်းက ပြောသည်။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးနိုင်ငံများအတွက် အတိုး နှုန်းမူဝါဒသည် နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များအတွက် မောင်းနှင်အားတစ်ခုဖြစ်သော် လည်း မြန်မာနိုင်ငံသည် ဖွံ့ဖြိုးသောငွေကြေး ဈေးကွက်မဖြစ်ပေါ်သေးခြင်းကြောင့် ငွေး ကြေးကဏ္ဍအတွင်း ငွေကြေးလည်ပတ်မှုသည် ပြည်တွင်းစီးပွားရေးကို အားပေးမြှင့် တင်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို တွန်းအား ပေးနိုင်သည့် ပမာဏမရှိသေးကြောင်း ဦးစိုး မင်းက သုံးသပ်သည်။
ယင်းသို့ အခြေအနေမျိုးတွင် အတိုးနှုန်း အပြောင်းအလဲသည့်စီးပွားရေးကို အ ထောက်အကူအပြုနိုင်ဘဲ အရည်အသွေး မပြည့်ဝသည့် ချေးငွေများကို တိုးပွားစေပြီး ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကို ထောက်ပံ့ရာရောက် သွားနိုင်ပြီး စီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုကို ပျက်စီး စေနိုင်သည့်အတွက် စဉ်းစားချင့်ချိန်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ဦးစိုးမင်းက ဆိုသည်။
ပြည်တွင်းဘဏ်များကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗ ဟိုဘဏ်မှအတိုးနှုန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး သတ်မှတ် ချက်ဘောင်အတွင်းတွင် အပ်ငွေ၊ ချေးငွေ အ တိုးနှုန်းများကို လွတ်လပ်စွာလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြု ထားပြီးဘဏ်အချင်းချင်းငွေချေးခြင်းများ အတွက်အတိုးနှုန်းများကိုနှစ်ဖက်သဘော တူသည့်အတိုးနှုန်းဖြင့်လွတ်လပ်စွာဆောင် ရွက်ခွင့်ပြုထားကြောင်း သိရသည်။
Previous articleMinistry Issues Criteria for Farm Commodity Exports
Next articleDaNa Facility Unveils Report on Kachin State’s SME Ecosystem